China pp umngxuma iibhotile umaleko ipeyile yoMvelisi kunye noMthengisi | Sihai
Kk.ibhotile enamanzi enziwe ngebhotile yiphepha elingenanto ngokufaka isicelo esahlukileyo esenziwe ngobungakanani obahlukeneyo, ubunzima, i-GSM kunye nokuma kweebhotile kunye nokuhambisa, kulungile kwiimveliso zebhotile ezahlulwe ngeendlela ezininzi kwiipelethi, yeyona pad ilungileyo yokukhusela iibhotile ukupakisha kunye nokuhambisa. Isetyenziswa ikakhulu kwimveliso yotywala, ibhiya, iwayini, iibhotile kwimizi-mveliso, iimveliso zokutya, iimveliso zeenkonkxa kunye nezinye ukupakisha iibhokisi, ukuhambisa iimpahla, indawo yokugcina izinto, ukungenisa ngaphakathi, ukuthumela kwelinye ilizwe ukukhusela iimveliso.
Iibhotile zokubeka iphedi zizinto ezifanayo njengephepha elingenanto, bubunzima bokukhanya, ukungangeni manzi, ukuhlala ixesha elide, ukomelela, ukulingana okufanayo, umphezulu ogudileyo, ukumelana nobushushu, amandla oomatshini aphezulu, uzinzo lweekhemikhali kunye nokufakwa kombane, iimpawu ezingenayo ityhefu. Kungaba ngokwendlela eyahlukeneyo yesicelo ukongeza izinto ze-ESD ezenziwe nge-ESD iphepha elinomngxunya wephepha, yongeza izinto ze-UV ezenza i-UV ikhusele iphetshana lephepha le-sheet elisetyenziselwa ukusetyenziswa kwangaphandle, inokwenza imilo eyahlukeneyo kwiibhotile ezahlukeneyo, iinkonkxa kunye nabanye abantu, Uluhlu lwephedi lunokwenza umda oshushu otywiniweyo, umda we-flap nge-velcro yokulungisa okuhle kunye nokukhusela iimveliso.
Egqithileyo pp ibhokisi engenayo incence enesakhelo
Okulandelayo: pp umaleko iphedi umaleko